Xildhibaano reer Puntland ah oo degdeg ku aqbalay baaqii Cabdi Weli Gaas – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xildhibaano reer Puntland ah oo degdeg ku aqbalay baaqii Cabdi Weli Gaas
Mareeg.com: Xubo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo kasoo jeeda deeganada Puntland ayaa ka jawaabay baaqii C/weli Gaas ee ahaa iney Garowe kusoo laabtaan muddo ku siman ilaa 15 August 2014.
Baaqa Gaas ayaa salka ku hayey carro Puntland ka qaadday heshiis arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay Muqdisho, kaasoo la sheegay inuu maamul loogu dhisayo gobollada Galgaduud iyo Mudug.
Waxaa maanta magaalada Garoowe gaar 6 xildhibaan oo ka baxay Muqdisho, kuwaasoo uu hogaaminayo Xildhibaan Xasan Abshir Faarax.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Puntald ayaa xildhibaannadaas kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha Garowe.
Xildhibaanada ayaa la geeyey aqalka madaxtooyada Puntland, halkaasoo uu ku qaabilay Madaxweynaha maamulkaas ee baaq ay Garowe ku tageen usoo diray C/weli Maxamed Cali Gaas.
Gaas oo si kooban warbaahinta ula hadlay, ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay soo laabashada xildhibaannada iyo weliba sida ay uusoo ajiibeen baaqii horay loogu jeediyey ee ahaa inay Puntland dib ugu soo noqdaan.
Xildhibaan Xasan Abshir Faarax oo ku hadlayey afka xildhibaannada ayaa isna sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin in iyagoo nabad qaba ay deegaanada ay kasoo jeedeen dib ugu soo noqdaan.
“Markii aanu maqalnay baaqii aad soo jeediseen, Puntland dadka kaga jira in la yimaado waanu soo dhaqaaqnay runtii waxna ma aanan sugin Ilaahayna nabad buu nagu keenay” ayuu yiri Xasan Abshir Faarax.
31/7/2014 ayaa madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Gaas wuxuu ku dhawaaqay inuu xiriirka u jaray dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, isagoo tilmaamay inuu ka xumaaday in maamulka gobollada dhexe lagu daro gobolka Muqdug.